खाटमा थिए एक जोडी सर्प, ती माथि बसिन् फोनमा व्यस्त महिला त्यसपछि… - Kavre Online
भारतको उत्तर प्रदेशको गोरखपुर जिल्लामा एउटा निकै दुर्भा*ग्यपूर्ण घटना सार्वजनिक भएको छ । यहाँ एक महिला आफ्नो बेडरुममा आएको एक जोडी सर्पमाथि फोन गर्दागर्दै बसिन् । सर्पले उनलाई तुरुन्त ड*से र उनको मृ*त्यु भयो ।गोरखपुर जिल्लामा बस्ने मिरा नामकी महिला फोनमा कुरा गरिरहेकी थिइन् । उनका श्रीमान् जय सिंह थाइल्याण्डमा काम गर्छन् । फोनमा कुरा गर्दागर्दै मिरा बेडरुममा गइन् र बेडमाथि बसिन् ।
उनलाई थाहा थिएन, बेडमा एक जोडी सर्प छन् । सर्पले मिरालाइ डसेलगत्तै परिवारले उनलाई नजिकैको सरकारी अस्पताल भर्ना गरे त्यहाँका डाक्टरले उनलाई मऊ जिल्लाका लागि रिफर गरे तर उनको सरकारी अस्पतालमा नै मृ*त्यु भयो ।
ती जोडी सर्प धेरै बेरसम्म बेडमा नै घुमिरहेको भारतीय मिडिया आजतकले बताएको छ । रिसाएका मानिसहरुले सर्पलाई पिटिपिटी मारि*दिएको बताइन्छ ।मिराका श्रीमान् थाइल्याण्डमा बस्छन् । मिराको एक वर्षकी छोरी पनि छिन् । जतिबेला यो घटना भयो तब उनी आफ्नी काकीसँग अर्को कोठामा सुति*रहेको स्रोतले बताएको छ ।
644 Post Views
Prevदशैंमा लामाे विदा बस्ने साेचमा हुनुहुन्छ ! गृहमन्त्रालयबाट आयाे यस्ताे दुखद खबर
Nextएक महिलाको निधन भयो, चितामा हाल्ने तयारी गर्दै गर्दा झस्किए मलामी !
रवि लामिछानेका समर्थकले गरेको फोहोरका कारण भरतपुर दुर्गन्धित
अर्जुन क्षेत्रीले फेरी गरे २०७६ सालमा नेपालमा यस्तो हुने डरलाग्दो भबिष्यबाणी (भिडियो सहित्)
छोरीको शरीरको विकास नभएपछि मातापिताले डाक्टरकहाँ… (4,130)
कुकुरले लि*ङ्ग खाईदिएपछि बिचरा यी भाईको अबस्थालाई… (1,382)